Puntland oo cabasho u gudbisay guddiga doorashada Soomaaliya.
Khamiis, 08 December 2016 08:17 | Qoraaga: Tafatiraha | Muqdisho (afdheer) Madaxweyne ku xigeenka punched Dr. Camey ayaa cabasho rasmi ah ugudbiyey guddiga doorashada Soomaaliya cabashadaas oo ku saabsan hab qeybsiga aqalka sare ee Somaliland.
11 xubnood ee laga soo xuli doono aqalka sare ee somaliland ayaa hore madasha qaran loogu heshiiyey in beelaha Sool iyo Sanaag laga siiyo min xubin oo la micna ah in 2 xubnoid aqalka sare ee Somaliland ku yeeshaan beesha Daarood.
Go'aankii madasha waran ayey qaar ka mid ah madaxda waqtigoodu dhammaaday isku dayeen in ay ka leexiyaan shaxdaas lagu heshiiyey meeshana laga saaro labadii xubnood ee beelaha Sool iyo Sanaag in kastoo warar aan la xaqiiq sheegayaan in mid ama hal xubin loo qorsheeyey shir uu guddoominaayey Jawaari oo ah siihayaha afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya.
Dhacdadaas ka dib Puntland waxay joojisay doorashooyinkii kasocday Puntland iyadoo hiwlwadeenada doorashada qaran laga codsaday in aqalka sare ee Somaliland lagu saleeyo sidii heshiiskii madashu ahaa.
Shirka madaxda madasha ee Shalay ka furmay Muqdisho oo ujeedadiisu tahay sidii bisha Diiseember2016 loo afmeeri lagaa guud ahaan doorashada Soomaaliya sannadka cusub 2017 ay Soomaaliya u yeelan laheyd dowlad cusub ayaa qodob ka mid ah wuxuu yahay sidii loo xallin lahaa cabashada Puntland.
Puntland waxay u aragtaa in jidkii saxda ahaa ee lagu heshiiyey doorashadaas in la baal maray waxaana Puntland lagaga dhawaaqay in aysan ka qeyb gali doonin doorashada 2016 Puntland haddii aan si sax ah loo maamulin aqalka sare ee Somaliland.
Warar lagu kalsoon yahay fikirka Puntland waxaa la qaba dowlad hoboleedyada dalka qaar ka mida oo uu ugu horreeyo dowlad goboleedka Jubaland.
Doorashada labada aqal ee Soomaaliya waa gabagabo waxaana goor hore dhammeystiray Jubaland iyo Koonfur galbeed iyadoo hirshabeele noqon doonta maamulka 3aad ee soo gabagabeeya doorashada labada aqal ee sannadka 2016-2020.